ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा – Sandesh Press
ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताएर हैरान हुनुहुन्छ ? झुक्किएर पनि नखानुस् यस्ता खानेकुरा
November 19, 2020 330
काठमाडौँ । “भनिन्छ हरेक नेपालीलाई ग्यास्ट्रिक छ ।” खानपान गर्ने तरिका नमिल्दा ग्यास्ट्रिकको समस्याले सताउने गर्छ । ग्यास्ट्रिक भनेको पेटको भित्री भाग सुन्निनु, ग्यास बढ्नु भन्ने हुन्छ । यस्तो समस्या भएमा पेट फुल्ने, हावा भरिएको अनुभूति हुने, खानेकुरा राम्ररी नपच्ने, लामो समय नखाँदा पेट पोल्ने, खान मन नलाग्ने, ढ्याउ आइरहनेलगायत समस्या हुन्छन् ।
यदि तपाइलाई पनि ग्यास्ट्रिकको समस्या छ भने भुलेर पनि यी खानेकुरा नखानुहोला:
Prevयुएईमा निधन भएका रेवतले देशको माटो पनि टेक्न पाएनन्, पाँच महिनापछि बल्ल भयो अन्त्येष्टि
Nextभाग्यमा छ भने भगवानले २० क’रोडले हान्छन्, टिनको छानो फु’टाएर घर भित्र आउँछ धन
आमाले गरिन आफ्नै छोरासंग बिहे, गाउंले ले एकै ठाउँमा राखेर छुट्याउन खोज्दा छुट्टिन मानेनन् ( हेर्नुस् भिडियो)